Ngwaahịa na lierslọ Ọrụ - Ndị Na-emepụta Ngwaahịa China - Nkebi nke 4
Dị: Pịnye Y-01, Pịnye Y-03
Igwe nkpuchi ihu ihu maka iji otu
A na-eji ihe mkpuchi ihu na-ekpofu ahịhịa ejiri akwa abụọ na-enweghị akwa na-enweghị ihe ọ bụla na-eku ume, kwesịrị ekwesị maka iji ya kwa ụbọchị.
Atụmatụ mkpuchi ihu ihu nwere ike iwepụ:
Obere ume iku ume, nzacha ikuku nke oma
N'ogige atụrụ iji mepụta ohere iku ume dị atọ nke ogo 360
Nhazi pụrụ iche maka okenye
Igwe nkpuchi ihu ihu maka iji otu (obere obere)
Nhazi pụrụ iche maka Nwa
Ihe mkpuchi ịwa ahụ ọgwụ maka otu ojiji
Masks ịwa ahụ ọgwụ nwere ike igbochi ihe ndị buru ibu karịa 4 microns na dayameta. Nsonaazụ nnwale na Laboratory mmechi nkpuchi na ọnọdụ ụlọ ọgwụ na-egosi na nnyefe nke ihe mkpuchi ịwa ahụ bụ 18.3% maka ụmụ irighiri ihe dị obere karịa 0.3 microns dịka ụkpụrụ ahụike zuru oke.
Atụmatụ ịwa ahụ ahụike ahụike:
Microfiltration meltblown akwa akwa: iguzogide nje bacteria na ájá pollen airborne chemical particulate anwụrụ na alụlụ
Ejikọghị akpụkpọ anụ akwa: mmiri absorption
Soft non-kpara akwa akwa: pụrụ iche elu mmiri na-eguzogide
Mmanya na-egbu egbu mmanya bụ ngwaahịa bara uru, ihe mejupụtara ya nwere mmanya isopropyl 70% -75%, na nsonaazụ nwoke na nwanyị.
84 na-egbu nje
Ndi mmadu anaghi achota oria anwuru anwuru nile di iche-iche
Nke a bụ obere ụlọ atomizer nwere kọmpat na ibu ibu.
1. Maka ndị agadi ma ọ bụ ụmụaka nwere ezigbo ọgụ ma nwee ike ịrịa ọrịa iku ume site na mmetọ ikuku
2. Ekwesighi iga ulo ogwu, jiri ya na ulo.
3.Convenient to carry out, enwere ike iji ya n'oge obula
Nlekọta ndị nọọsụ maka ịrịa ọrịa
A na-eji ngwaahịa a maka usoro nọọsụ nke ọgwụgwọ hemodialysis. ọ na-tumadi ekewet nke plastic tree, na-abụghị kpara akpali mmasị towel, ayodiin owu swab, gbalaga-enyemaka, absorbent tampon maka ọgwụ iji, roba uwe maka ọgwụ na ahụ ike, nyagide teepu maka ọgwụ na ojiji, drapes, bed patch n'akpa uwe, akpali mmasị gauze na mmanya swabs.
Mbelata ibu nke ndị ọrụ ahụike ma melite arụmọrụ ọrụ nke ndị ọrụ ahụike.
Họrọ ngwa ngwa dị elu, ọtụtụ ụdị nhọrọ na nhazi mgbanwe dịka usoro ojiji eji eme ihe.
Elsdị na nkọwapụta: Adị A (isi), Bdị B (raara onwe ya), ,dị C (raara onwe ya nye), Ddị D (ọtụtụ ọrụ), Edị E (ihe nkedo catheter)
Dị nkịtị, ụdị nchekwa, nku kwụ ọtọ, nku nku
Otu Jiri AV Fistula agịga Setịpụrụ
Otu ojiji AV. A na-eji Fistula agịga Sistemu na sekit ọbara na usoro nhazi ọbara iji nakọta ọbara site na ahụ mmadụ wee wepụta ọbara esichara ma ọ bụ ihe ndị mejupụtara ọbara n'ahụ mmadụ. Ejirila Fistula agịga AV na ụlọ ọgwụ na ụlọ na mba ofesi ruo ọtụtụ iri afọ. Ọ bụ ngwaahịa tozuru oke nke ụlọ ọrụ na-ahụkarị maka ọnya ọrịa.
Hemodialysis ntụ ntụ (jikọọ na igwe)
Dị ọcha, ọ bụghị condens.
Medical ọkwa ọkọlọtọ mmepụta, nlezianya bacteria akara, endotoxin na arọ metal ọdịnaya, n'ụzọ dị irè mbenata dialysis mbufụt.
Ogologo ike, ezi uche nke electrolyte, na-eme ka nlekọta ahụike jiri nchekwa wee meziwanye ogo dialysis.